Ukuphupha ngehood od Discover Discover Online ▷ ➡️
I-hood sisiqwenga sentloko esithunyiweyo okanye esineqhosha kumda wentamo yengubo. Inganxitywa entloko njengokuzikhusela, umzekelo, kwimvula okanye kubanda. Ii-hoods zifumaneka kwizinto ezininzi zeempahla, ezinje ngeebhatyi, iibhatyi, okanye iijezi.
Nangona kunjalo, i-hood ayinakusetyenziswa kuphela njengokukhusela kwizinto. Abanye abantu bazama ukufihla ubuso babo okanye ukuzifihla phantsi kwayo. Khawufane ucinge nje ngamalungu eKu Klux Klan, afihla isazisi sawo ngasemva kweehood ezimhlophe.
1 Uphawu lwephupha «hood» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «hood» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «hood» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «hood» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwephupha ubona ephupheni le-hood ikakhulu isilumkiso sikufuphi. peligro. Ke ngoko, umphuphi kufuneka aziphathe ngononophelo nabanye abantu kwaye azikhathalele.
Ukuba ubona omnye umntu enxibe i-hood ngelixa ulele, kuhlala kuboniswa ukuba umntu osondeleyo kuwe ufihla into kumphuphi. Ukuba umntu oleleyo unxibe i-hood, angayifumana phambi kwabanye Iimfihlakalo. Ungathanda ukuyigcina le nto kwaye angayiphisi ngayo. Nangona kunjalo, ukuba uyayisusa ihood yakho, oku kungabonisa ukuzimisela kwakho ukwabelana ngeemfihlo zakho nabanye.
Ijezi enesigqubuthelo ihlala ibonakala njengophawu lwephupha. Umngcipheko ibhekisa kumphuphi, ongathanda ukuzifihla kwabanye abantu ebomini bokuvuka. Ukuba ubona i-hood kwenye indawo ephezulu ephupheni, oku kungabonisa ukuba awufuni ukubonisa oontanga bakho onke amalungu obuntu bakho. I-hood ekapa okanye yengubo ephupheni inokubonisa ingcinga yokhuseleko, kunye nokunqwenela ukukhuselwa.
Ngokubanzi, i-hood inokubonwa ngokunxibelelana ngokusondeleyo ne "hood" isimboli yokulala ngelixa ulele. Kule meko, iphupha eli linesilumkiso kulowo uleleyo. Kuya kufuneka ndijonge phambili ukunyelisa Lumka.
Uphawu lwephupha «hood» - ukutolikwa kwengqondo
Kubonwa ngokwembono yengqondo, umzobo ephupheni enxibe i-hood ufuzisela a isoyikiso. Lo mntu akanyanzelekanga ukuba abe nomsindo, umntu oleleyo uziva esongelwa ngabo. Ke ngoko, umntu kufuneka aqwalasele ukuba ngubani onokubangela iimvakalelo ezinjalo el mundo ngokwenene.
Ngapha koko, uphawu lwephupha "hood" lunokubonisa ukuba umphuphi ngoku ufuna ukubuyela kwabanye emva kwenqanaba lobomi athe warhoxa kulo kwimeko yakhe. Iphupha le-hood linokukhuthaza ukuba wamkele eyakho Ukwabelana ngobuntu uxakeke kakhulu. Kungenxa yokuba mhlawumbi ubungazi ngenene ngesiqu sakho. Umntu uyakwamkela oku ngoku ukuze afezekise ingqibelelo yokomoya.
Ngamanye amaxesha, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, i-hood inokuyilwa ngokufanayo kwi "facade" yomfanekiso wephupha ngexesha lokulala. Kule meko, umnqweno wephupha elifihliweyo unokuvela. ukhuseleko kunye nokufihla ukhuseleko. Ngokunokwenzeka umphuphi kufuneka aboniswe ukuba angathanda ukufihla iipropathi ezithile.
Ukubona komfazi ogqume intloko kunokubonisa ubuqhetseba. Ukuba umntu unxibe isigqubuthelo ephupheni, uhlala efuna ukurhoxa kwimeko ethile kwihlabathi elivukayo. Imonki enesigqubuthelo ihlala iquka umfanekiso wephupha. icala lokucinga Ukuphupha, okwangoku kubonisa ngokucacileyo ebomini bokuvuka. Ukuba ubona ingelosi ukufa kunye nehood yakho ephupheni, oku kunokuqondwa njengesilumkiso sokutshintsha.
Uphawu lwephupha «hood» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo lohlalutyo lwamaphupha, isimboli yephupha "hood" ihlala ibhekisa kokuqinisekileyo i ngcebiso okanye ulwazi olugcinwa ngumphuphi ngaphakathi. Ufuna ukutyhila oku ngexesha elifanelekileyo kuye.